Fahasamihafana eo amin'ny vahaolana mivaingana Substitutional sy Interstitial | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny vahaolana mivaingana Substitutional sy Interstitial | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & natiora / Siansa / Simia / Simia tsy simika / Fahasamihafana eo amin'ny Vahaolana matevina mifehy ny lalàm-panorenana sy ny interstitial
Fahasamihafana eo amin'ny vahaolana mivaingana Substitutional sy Interstitial
21 Jona 2018 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vahaolana mivaingana solon'ny lalampanorenana sy ny interstitial dia ny vahaolana mivaingana solon'ny lalampanorenana dia mitaky ny fanoloana ny ataon'ny solvent amin'ny ataoma solute, amin'ny famoronana azy. Mifanohitra amin'izany no izy, tsy misy ny famindrana ny ataon'ny solvent amin'ny atoms solute amin'ny famolavolana solution solid interstitial, fa kosa, ny molekiola solute dia miditra amin'ny lavaka eo anelanelan'ny atoms solvent.
Ny vahaolana mivaingana dia vahaolana mivaingana amin'ny vahaolana iray na maromaro amin'ny solvent mitovy. Ao, singa roa na maromaro no mitranga amin'ny fanjakana mafy orina. Antsoinay ho vahaolana izany fa tsy fitambarana satria ny firafitry ny solvent dia tsy miova miaraka amin'ny fanampin'ny solut. Amin'ny dingan'ny fanamafisana ny vahaolana matanjaka, ny tanjaky ny metaly madio dia azo ampitomboina amin'ny alàlan'ny fananganana singa hafa. Azontsika atao izany amin'ny alàlan'ny famolavolana vahaolana mafy orina. Miankina amin'ny singa alloying, misy endrika roa ny vahaolana mafy orina toy ny vahaolana solon'ny lalampanorenana sy interstitial.
2. Inona no vahaolana mivaingana mifehy ny lalàm-panorenana
3. Inona no vahaolana mivaingana Interstitial
4. Fampitahana mifanila - Vahaolana mifanohitra amin'ny lalàm-panorenana vs Interstitial amin'ny endrika Tabular
Inona ny vahaolana mivaingana manaraka ny lalàm-panorenana?
Vahaolana mivaingana mifototra amin'ny lalàm-panorenana dia vahaolana mivaingana miforona rehefa soloin'ny atoma solita ny atôma misy solventa. Mba hamoronana an'ity karazana vahaolana mivaingana ity dia tokony ho lehibe ny atôma misy solika hanoloana ny atôma misy solvent ao amin'ny makarakara. Ireo atôma solita dia ampidirina ao amin'ny lattice amin'ny alàlan'ny fanoloana ny atôma amin'ny toerana manokana an'ny lattice. Eto, ny singa manaparitaka sasany dia misy atôma solty izay afaka manolo kely ny atomona misy solventy amin'ny vola kely fotsiny, ary misy singa mampangaroharo izay afaka manolo ny ataon'ny solvent manerana ny vahaolana mivaingana.
Io karazana vahaolana mivaingana io dia miorina rehefa mitovy habe amin'ny atôma mitovy ny atôma solita sy solvent. Ankoatr'izay, ny mari-pana avo lenta dia afaka mampitombo ireo fanoloana ireo. Ankoatr'izay, misy karazany roa ny vahaolana mivaingana soloina ny; vahaolana mafy orina sy tsy mifanaraka. Fomba famolavolana mafy orina voatondraka rehefa manolo ny atôma misy solventa ny atôta solita amin'ny toerana itiavan'ny lattice misy solvent. Ohatra: rafitra Cu-Au. Vahaolana mivaingana tsy mitombina no miforona rehefa soloin'ireo atôma soletra tampoka ireo atôma misy solvent ao anaty latte.
Inona ny vahaolana mivaingana Interstitial?
Vahaolana mafy orina interstitial dia vahaolana fanjakana mivaingana izay miforona rehefa miditra ao anaty lavaka eo anelanelan'ny atôma misy solvent ao amin'ny lattice ny atôma solty. Any, ireo atôma solita dia kely hidirany amin'ireo lavaka ireo. Antsoinay hoe tranokala interstitial ireo lavaka ireo.
Sary 01: Vahaolana henjana iraisana
Ity dingana ity dia manalefaka ny fifamatorana eo amin'ireo ataon'ny solvent. Miharatsy endrika toy izany koa ny makarakara. Mba hitrangan'izany dia tokony ho latsaky ny 40% ny haben'ny atômika ataon'ny solty. Ny atôma solita dia miditra ao amin'ny lattice interstitaced. Ny singa tokana afaka mamorona an'ity karazana vahaolana matanjaka ity dia H, Li, Na ary B.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny vahaolana mivaingana Substitutional sy Interstitial?
Vahaolana mivaingana mifototra amin'ny lalàm-panorenana dia vahaolana mivaingana miforona rehefa soloin'ny atoma solita ny atôma misy solventa. Io karazana vahaolana mivaingana io dia tsy miforona raha tsy misy ny atôma solita ampy hanoloana ny atôma misy solvent ao amin'ny lattice. Ambonin'izany, ny haben'ny atôma an'ny solita dia mitovy amin'ny haben'ny atôma misy solvent. Vahaolana mafy orina interstitial dia vahaolana fanjakana mivaingana izay miforona rehefa miditra ao anaty lavaka eo anelanelan'ny atin'ny solvent ny latte. Ireo vahaolana mafy orina ireo dia tsy miova raha toa ka kely ny atôma solty hidirana amin'ny lavaky ny makarakara. Ho fanampin'izany, ny haben'ny ataoma ataoma ataona solute dia tokony ho 40% amin'ny haben'ny atôma misy solvent mba hamoronana an'ity karazana lattice ity. Io no mahasamihafa indrindra ny vahaolana mivaingana solon'ny lalampanorenana sy interstitial.
Famintinana - Vahaolana mavitrika mifanohitra amin'ny lalàm-panorenana vs.
Ny vahaolana mivaingana dia ireo vahaolana mafy orina izay misy karazana singa roa na maromaro ao anatin'ny fifangaroan'ny fanjakana mafy orina. Misy karazany roa ny vahaolana mivaingana toy ny vahaolana mivaingana solon'ny lalampanorenana sy interstitial araky ny fomba famoronany. Ny maha samy hafa ny vahaolana mivaingana solon'ny lalampanorenana sy ny interstitial dia ny amin'ny famolavolana vahaolana mivaingana soloina lalampanorenana dia misy ny fanoloana ny atona solventy amin'ny atôma soletra ary raha ny famoronana ny vahaolana henjana interstitial dia tsy misy famindrana ny atoms solvent ataon'ny atoms solute , kosa, ny molekiola misy solita dia miditra ao anaty lavaka eo anelanelan'ny atelin'ny solvent.
1. “Fanamafisana ny vahaolana matanjaka.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19 Jona 2018. Hita eto
2. FACTORY ZON'ILAY KELY (MINISITR an'ny fiarovana) Araho. “Vahaolana matevina.” LinkedIn SlideShare, 18 Novambra 2013. Azo jerena eto
1. 'Solute interstitial'Ny ISiamrut ao amin'ny Wikipedia anglisy (CC BY-SA 3.0) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Agent Agent sy Chelating Agent Fahasamihafana eo amin'ny kileman-toetra sy ny kileman-toetra Fahasamihafana eo amin'ny Absorptivity sy ny molar Absorptivity Fahasamihafana eo amin'ny fifamatorana hidrogenika Intermolecular sy Intramolecular Fahasamihafana eo amin'ny sela sela sy sela sela
Fahasamihafana eo amin'ny basikety sy ny Netball
Fahasamihafana eo amin'ny IDS sy IPS
Fahasamihafana eo amin'i Pathos sy Bathos
Fahasamihafana eo amin'ny Preterite sy ny tsy fahalavorariana
Fahasamihafana eo amin'ny fanaraha-mason'ny Inventory sy ny fitantanana inventory